Budada Walnut Peptide - Warshad Soo Saaraha
Budada walnut peptide waa walnut peptide yar oo hodan ku ah 18 nooc oo ah amino acids iyo macdano kala duwan iyadoo la isticmaalayo buskudka walnut sida walxaha ceyriinka ah iyo heerkulka hooseeya ee enzymatic hydrolysis iyo bayoolajiyada kale ee talaabooyinka badan leh.
Caddaynta Walnut Peptide
Product Name Budada Walnut Peptide
Color Qoryaha huruud ah ama hurdi bunni ah
Waa maxay budada Walnut Peptide?
Culeyska molikiyuulka ee walnut peptide budada ah wuxuu ka yaryahay 1000u, iyo saamiga borotikalka hydrolyzate wuxuu gaari karaa 90% ， taas oo ay fududahay in jirka bini'aadamku nuugo. Sidoo kale, waxay leedahay milanka biyaha wanaagsan, emulsification iyo nashaadaadka nafleyda.
Maxay yihiin faa'iidooyinka budada Walnut Peptide?
Millet oligo Hagaaji barashada iyo awooda xasuusta
Budada walnut peptide waxay ka dhigi kartaa unugyada neerfaha maskaxda maskaxda xoog, waxay kobciyaan dheef-shiid kiimikaadka maskaxda, waxay soo celiyaan shaqada unugyada maskaxda, waxayna si wax ku ool ah u hagaajisaa maskaxda iyo xusuusta.
Budada walnut peptide waxay kordhin kartaa heerka xakamaynta ACE ee vivo, si wax ku ool ah u yareysa wax soo saarka angiotensin ll, taas oo lagu gaarayo saameynta hoos u dhigida cadaadiska dhiigga.
Kahortaga cudurka Alzheimers
Budada walnut peptide waxay leedahay astaamo neuroprotective iyo antioxidant taas oo si wax ku ool ah u xakamayn karta xagjirnimada bilaashka ah, hagaajinta waxqabadka enzyme antioxidant, nidaamiya arrimaha caabuqa. Waa shey aamin ah oo qiimo leh in laga hortago lana daaweeyo cudurka Alzheimers.
Budada walnut peptide waxay leedahay saameyn bakteeriyada xoog leh oo si wax ku ool ah u xakameyn karta tirada gumeysiga bakteeriyada waxyeellada leh waxayna ka ilaalin kartaa jirka bini'aadamka gumeysiga waxyeellada leh. Isla mar ahaantaana, walxaha peptide waxay xoojin karaan awoodda fagocytic ee unugyada fagocytic waxayna baabi'inayaan unugyada apoptotic, qashinka dheef-shiid kiimikaadka iyo unugyada fayraska waxyeellada leh.
Tijaabo / Daraasad laga soosaaray Walnut oo ku saabsan horumarinta waxbarashada iyo xusuusta jiirka
Enzymatic Hydrolysis ee Walnut Protein si loogu diyaariyo ACE Inhibitory Peptides iyo Waxyaabaha ay Ku Shaqeeyaan.
Daraasada ku saabsan waxqabadka faragelinta ee walnut peptide ee ku saabsan qaabka tijaabada ah ee waallida dadka da'da ah ee ku nool vivo iyo vir.
Waxqabadka Bakteeriyada ee Walnut Hydroly-sate.